holidayhomesinis, the Catalan
Ifulethi elingasolwandle elinokubukwa okuhle ePutzu Idu. Kunamabhishi ama-2 aseduze kakhulu ngakho-ke ngaphakathi kwebanga lokuhamba. Amandla abantu abadala abangu-2 abanezingane ezimbili. Overandi ababili + ithala elingamamitha-skwele angaba ngu-50 elinezihlalo zengadi netafula, izihlalo zedekhi kanye neshawa eyengeziwe yangaphandle, indawo yokupaka yangasese. Izitolo, amabha kanye nezindawo zokudlela phakathi kwemizuzu engu-6 uhamba, eziningi ezengeziwe ngaphakathi kwerediyasi eyi-1-2.5 km.
Endaweni kukhona ukuqashwa kwamabhayisikili, isikebhe senjoloba, ama-surf, isikole sokuhamba ngomkhumbi, ukutshuza, isikole sokugibela, uhambo lokuhamba ngomkhumbi.
Indlu ingafinyelelwa ngemigwaqo emibili ewubhuqu, owokuqala ongamamitha angaba ngu-120, owesibili, ube lula ngamamitha angaba ngu-350. Kungenzeka ukushiya imoto emgwaqeni oyitiyela futhi ufike endlini ngezinyawo, cishe amamitha angu-50.
Ifulethi lizungezwe izihlahlana ezivamile zezitshalo zaseMedithera ngakho-ke kunezinhlobo ezahlukene zezinyoni nezilwane zasemhlabeni njengezimpungushe, amagundane ahlanganisa onogwaja basendle, nezinye izinhlobo eziningi zezilwane ezivamile zalezi zindawo zemvelo.
Sisezindaweni zokungcebeleka ezisogwini lolwandle, amabhishi amaningi anezici ezihlukile, amachweba anama-flamingo kanye nezinhlobo eziningi zasemanzini ezivamile zalezi zindawo.
Ngihlala kude nendlu ngakho-ke ngitholakala nganoma yiluphi ulwazi.